रुपन्देही र स्याङ्जाका गरी थप दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु – हिमालयन ट्रिबुन
बुटवल । रुपन्देही र स्याङ्जाका गरी थप दुई कोरोना संक्रसमितको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ६ का ६० वर्षीय पुरुषको शुक्रवार राति मृत्यु भएको हो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले ज्वरो खोकी र स्वासप्रस्वासको समस्या लिएर शुक्रवार नै अस्पताल आएका उनको साँझ मृत्यु भएको जानकारी दिए । अस्पतालको फिबर क्लिनिकमा आएका उनको जिन एक्सपर्ट मेसिनबाट स्वाव परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र आईसियूमा राखि उपचार शुरु भईरहँदा उनको मृत्यु भएको डा. गौतमले जानकारी दिए । उनी लामो समयदेखि दम तथा छारेरोगको दिर्घरोगी समेत रहेको डा. गौतमले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, कोरोना संक्रमित स्याङ्जाका एक पुरुषको उपचारका क्रममा पोखरामा मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमण भई भदौ २४ गते पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा भर्ना भएका स्याङ्जाको पुतलीबजारका ८५ वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।